Otu esi etinye ma ọ bụ kwalite na Linux Kernel 5.14 na Debian 11 Bullseye - WebSetNet
October 3, 2021 by Jọshụa James
Wụnye 5.14 kernel
Tinye ebe nchekwa na-adịghị akwụ ụgwọ na Sources.list
Mepụta faịlụ pinning APT maka ngwugwu Bullseye & anaghị akwụsi ike
Wụnye ma ọ bụ kwalite na Linux Kernel 5.14
Linux kernel 5.14 apụtala ma bụrụ onye ama ama maka iji ọtụtụ atụmatụ, nkwado na nchekwa ọhụrụ nwalee. Mwepụta kernel Linux 5.14 agabigala ndị ntọhapụ asaa n'ime ọnwa abụọ gara aga yana rite uru site na ntinye aka nke ndị nrụpụta 1,650 dị iche iche. Ndị na-enye aka na mmepe kernel Linux gụnyere ndị na-enye aka na ndị na-ere ahịa a ma ama dị ka Intel, AMD, IBM, Oracle, na Samsung.
Iji tinye kernel 5.14 site na iji APT, nke mbụ, mepee faịlụ /etc/apt/sources.list gị:
Na-esote, ihe ngwọta dị mfe bụ iji apt-pinning iji zere inwe alaka ụdị dị iche iche na-eme ka sistemụ gị na-akpali mmelite site na ebe nchekwa nnwale. Mepee faịlụ a site na iji ndezi ederede.
Usoro a na-aga mmelite niile masịrị ya Bullseye nwere akara dị elu (500) karịa ejighị n'aka (100), yabụ, a naghị akpali gị na ngwugwu dị iche iche ka emelite ya site na ebe nchekwa na-akwụghị ụgwọ. Agbanyeghị, iji mee ka ọ dị mfe idobe kernel ka ọ dị ọhụrụ mgbe ị na-eme iwu mmelite dabara adaba maka ngwugwu Bullseye ọkọlọtọ gị, ihe atụ dị n'elu edobela. linux-image-amd64 dị ka ihe kacha mkpa (1000) na-eji ebe nchekwa anaghị akwụsi ike n'elu ebe ọ bụla ọzọ maka naanị ngwugwu ahụ.
Na-esote, melite ebe nchekwa gị.
Ị ga-achọpụta na ị nwere ngwugwu imelite.
Gbaa iwu nkwalite dabara adaba ka ịmalite imelite na Linux Kernel 5.14.
Ozugbo emechara, malitegharịa sistemụ gị maka kernel 5.14 ọhụrụ ka ọ rụọ ọrụ.
Ozugbo ịbanyeghachiri, mepee ọnụ ọnụ gị wee pịnye iwu na-esonụ iji nyochaa nwụnye.
Dịka n'elu, etinyere kernel 5.14. Nhọrọ, ị nwere ike ịgba ọsọ iwu amụma apt-cache maka ozi ndị ọzọ:
Dị ka n'elu, ihe nrụpụta kernel dị na 5.14.6-3. A ga-ahụ mmelite ọhụrụ ọ bụla bịarutere na-akpaghị aka mgbe ị na-eme ya iwu mmelite dabara adaba ka ịlele maka mmelite maka ngwungwu nchekwa Debian 11 Bullseye ndị ọzọ.
Ị mụtala otu esi etinye kernel 5.14 kachasị ọhụrụ na Debian 11 Bullseye gị na nkuzi. Rịba ama, ọ bụrụ na sistemụ gị bụ ihe nkesa na-emepụta ihe, a ga-adụ ọdụ ka ị jiri kernel dị na Debian na-ebugharị maka nkwụsi ike kachasị. Agbanyeghị, maka ndị na-achọ ịnwale kernel 5.14, ị nwere ike ịghaghachi azụ na kernel gara aga n'ụzọ dị mfe na menu buut, yabụ ịnwale ya abụghị echiche ọjọọ, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị nwetara ngwaike ọhụrụ nke anaghị akwado ya. kernel ngwugwu nke ndabara.
Categories Debian Tags Nnenna 11 Bullseye, Linux kernel Mail igodo
1 echiche na "Otu esi etinye ma ọ bụ kwalite na Linux Kernel 5.14 na Debian 11 Bullseye"
October 10, 2021 na 10: 39 am